Twin Screw Gearbox dia mandray ny fenitra ISO1328 farany teo, ny fiasan'ny varingarina vita amin'ny boloka, ary ny fampifangaroana ny traikefa maharitra sy ny fahaizan'ilay extruder kambana kambana, ny boaty STD dia noforonina tsara miaraka amina hevitra avo lenta avo lenta eran'izao tontolo izao ho an'ny visy kambana miodina. extruder, miaraka amin'ny zon'ny Intellectual Properties tsy miankina tanteraka.
Twin Screw Gearbox dia mandray ny fenitra ISO1328 farany teo, ny fiasan'ny varingarina vita amin'ny boloka, ary ny fampifangaroana ny traikefa maharitra sy ny fahaizan'ny extruder kambana kambana, ny boaty TDSN dia namboarina tamim-pitandremana miaraka amina hevitra avo lenta avo lenta eran'izao tontolo izao ho an'ny visy kambana miodina. extruder, miaraka amin'ny zon'ny Intellectual Properties tsy miankina tanteraka.
Zhitian dia manana traikefa amin'ny famokarana fikarohana sy fampandrosoana maherin'ny 20 taona. Ny barrels dia nampiasaina ho an'ny karazana extruders kambana, toa an'i Coperion, Berstroff, Leistritz, JSW, Toshiba, STEER, Famsun, Jwell sns.
Kitapo masinina famonoana kambana kambana
Kitapo kambana kofehy misy ny marika
Kitapo kambana sy barika mivantana tsy misy lamba firakotra
Fanavaozana ny barika barika Fanovana taloha Fanakalozana vaovao Liner A101 / Liner manontolo amin'ny faritra kambana Extruder Extruder
Antsipiriany haingana Product name: Screw Barrel Renovation fanovana taloha New Exchange A101 Liner / ankapobeny Liner of Twin Screw Extruder Parts Material: 45 # + Exchange C Liner / Liner Liner ankapobeny: fonosana metaly: boaty hazo Time lead: 30-60 andro Feature: vidiny tahiry Fanamboarana ny serivisy taloha 1. Esory ny barika taloha ary avereno apetraka amin'ny toerany ireo ampahany. 2. Zahao ireo lalan-drano raha misy fitohanana. 3. Ovao ny bushing mifanaraka amin'ny zavatra takinao, toy ny CC liner, C-ankapobeny liner, ankapobeny liner-ankapobeny liner, lalana telo ...
Kitapo kambana sy barika vita amin'ny Liner feno / Barika Liner ankapobeny
Ny singa visy dia ireo singa miasa lehibe indrindra amin'ny extruder visy kambana izay namaritra ny kalitao sy ny vokatra vokarin'ny plastika. ny kalitaon'ny tsipika famokarana iray manontolo, noho izany, ny orinasanay dia mampifangaro ny zavatra niainantsika nandritra ny taona maro, ny fahamendrehana momba ny firenena vahiny sy ny fampiasan'ny mpanjifa, avy eo mandray azy ireo, namolavola ireo karazana volo fanodinana sahaza sy masontsivana mety, avo tena fanatanterahana fanadiovana, fanoherana mitafy, fanoherana fanoherana.
Barika Screw Extruder, Shaft WR15E, Extruder Screw Double, Tex65aii Screw Segment, Barika ho an'ny Twin Screw Extruder, Barika visy ho an'ny fanodinana,